မောင်မောင်ခ (ပါမောက္ခ) - ဝီကီပီးဒီးယား
၂ နိုဝင်ဘာ ၁၉၁၇
၁၅ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀ဝ၅
(B.Sc. ရူပဗေဒ၊ ၁၉၃၉)
(M.Sc. ရူပဗေဒ၊ ၁၉၄၄)
(Ph.D ရူပဗေဒ၊ ၁၉၄၄)
(M Inst P.,၊ ၁၉၄၄)
(FR Met S.,၊ ၁၉၄၄)
ပထမဦးဆုံး မြန်မာနိုင်ငံသား ရူပဗေဒ ပါမောက္ခ၊
ဒေါက်တာမောင်မောင်ခ ကို ၁၉၁၇ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၂ ရက်နေ့တွင် အဖဦးရွှေလွင်+အမိဒေါ်စိန်တို့မှ မော်လမြိုင်မြို့၌ မွေးဖွားခဲ့သည်။
၁၉၃၄ ခုနှစ် အသက် ၁၇ နှစ်အရွယ်တွင် ရန်ကုန်မြို့၊ မြို့မကျောင်း (ယခု အ.ထ.က(၂)ဒဂုံ) မှ သင်္ချာနှင့်ပါဠိဘာသာဂုဏ်ထူးဖြင့် ၁၀ တန်းအောင်မြင်ခဲ့သည်။ ၁၉၃၉ ခုနှစ်တွင် B.Sc (Hons;) ဘွဲ့ကို ပထမအဆင့်ဖြင့်အောင်မြင်ခဲ့သည်။ အင်္ဂလန်နိုင်ငံသို့ပညာတော်သင်သွားရောက်ခဲ့သည်။ အင်္ဂလန်နိုင်ငံ၊ Imperial College နှင့် University of London တို့မှ M.Sc., DIC., M Inst P., Ph. D., FR Met S ဘွဲ့များကို ၁၉၄၄ ခုနှစ်တွင် ထူးချွန်စွာအောင်မြင်ပြီး ၁၉၄၅ တွင် မြန်မာပြည်သို့ပြန်လည်ရောက်ရှိခဲ့သည်။
၁၉၄၇ ခုနှစ်မှ ၁၉၆၃ ခုနှစ်အထိ ၁၆ နှစ်တိုင် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပထမဦးဆုံးသောမြန်မာနိုင်ငံသား ရူပဗေဒပါမောက္ခအဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရင်း သင်ကြားရေး၊ စီမံခန့်ခွဲရေး၊ သုတေသနတာဝန်များကို ဆောင်ရွက်ခဲ့သူဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် ၁၉၆၄ ခုနှစ်မှ ၁၉၇၇ ခုနှစ်အထိ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် (ယခင် ဝိဇ္ဇာ-သိပ္ပံတက္ကသိုလ်) ပါမောက္ခချုပ်အဖြစ် ၁၄ နှစ်ကြာ ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ ၁၉၇၅ ခုနှစ်တွင် အဝေးသင်တက္ကသိုလ်စတင်တည်ထောင်ခဲ့သူဖခင်ကြီးအဖြစ် ပညာရေးလောကတွင်ထင်ရှားသည်။ မြန်မာနိုင်ငံ၏သက်တမ်းအရှည်ကြာဆုံး ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ပါမောက္ခချုပ်တစ်ဦးဖြစ်သည်။
၁၉၄၇ ခုနှစ် ရူပဗေဒပါမောက္ခတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည့်နှစ်တွင် ဆရာမကြီးဒေါ်ခင်စိုးတင် (ဒေါ်ရူဘီခ) နှင့်ထိမ်းမြှားလက်ထပ်ခဲ့ပြီး သားဒေါက်တာအုပ်စိုးခ၊ သမီးများဖြစ်ကြသော ဒေါ်မေမီခ၊ ဒေါ်မေသီခ၊ ဒေါက်တာမြတ်မွန်ခတို့မွေးဖွားခဲ့ပါသည်။
ဆရာကြီး ဒေါက်တာမောင်မောင်ခ သည် အသက် (၉၀) အရွယ် ၂၀ဝ၅ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၅ ရက်တွင် ကွယ်လွန်ခဲ့သည်။  မြန်မာနိုင်ငံတွင်အထင်အရှားဆုံးရူပဗေဒပညာရှင်ဖြစ်သလို မိုးလေဝသပညာရှင်လည်းဖြစ်သည်။
↑ မောင်ဦးခင်မောင်။ "တက္ကသီလာမြကျွန်းသာ၏ဥယျာဉ်မှူး"၊ ကြေးမုံသတင်းစာ၊ ၂၀၁၇-၁၀-၃၁၊ စာ- စာမျက်နှာ ၁၈။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=မောင်မောင်ခ_(ပါမောက္ခ)&oldid=402048" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၂၈ မေ ၂၀၁၈၊ ၁၁:၄၇ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။